सर, हेर्नुस् न हाम्रो बायो ग्यास प्लान्ट ! – Fewa Times
सर, हेर्नुस् न हाम्रो बायो ग्यास प्लान्ट !
प्रकाशित मिति: August 25, 2017 7:56 am
– मृदु गैरापिप्ली
परीक्षाको नतिजा वितरण दिनभएकोले अभिभावकहरुको घूइचोमा म पनि घुस्रदै विद्यालयको प्राङ्गणमा पुगेँ । यसो बाहिरी ढोकाबाट दायातर्फ के हेरेथेँ स्कुले पोशाकमा चिटिक्क सजिएका केटाकेटीहरु आआफ्नो सिर्जना सहित विज्ञान र प्रविधिका सामाग्रिहरुलाई प्रदर्शन गर्न प्रतिरक्षारत देखेँ ।
त्यही भिडमाँझ कसैले भन्यो “सर, हेर्नुस् न हाम्रो बायो ग्यास प्लान्ट, हामीले धेरै मेहेनत गरेर बनाएका छौं ।” निपूर्णले निकै प्रफुल्ल मुद्रामा बोलाए । “प्राकृतिक ग्यास त सीमित छ प्रकृतिमा त्यसैले हामीले सीमित प्राकृतिक स्रोतलाई कम प्रयोग गर्दै नविकरणिय उर्जाकको स्रोतलाई प्रयोगमा ल्याउनु पर्छ ।” मेरो सहमति संगै उनले थपीरहे । “फेरि काठमाण्डौको फोहोर व्यबस्थापन पनि त दिनानुदिन जटिल बन्दैछ । वायो ग्यास प्लान्टको माध्यमबाट फोहोर व्यवस्थापन संगै इन्धन पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ ।” म भित्रको उत्साहित सरसफाइ सहजकर्ताले उनको भावनालाई उच्चकदर गर्याे । मैलै सोचेँ उनी नामका मात्र हैन विचार र सिर्जनाकापनि निपूर्ण रहेछन् ।
फोहोर व्यबस्थापन दिगो बाताबरणिय सरसफाइको अभिन्न अंग हो । कुहीने र नकुहीने फोहोर छुट्याएर राख्ने प्रचलन स्थापित गर्न सके काठमाडौँ उपत्यका लगायतका शहरहरुमा बायो ग्यास प्रविधि तथा प्राङ्गारीक मलउत्पादन उपयोगी बन्न सक्छ । “फोहोरबाट मोहोर कमाउँ” अभियानसंग पनि निपूर्णको विचार समानान्तर छ । प्लान्टमा जम्मा गरिएको गोबर, दिसा पिसाव लगायत कुहिने फोहोरलाई व्याक्टेरियाले मिथेन ग्यासमा परिणत गर्छ, सो ग्यासलाई एउटा ट्युवमा संकलन गर्दै पाइपबाट चुल्हो सम्म पुर्याउन सकिने र सो ग्यासलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिने उनी बताउँछन् । परिवारको आकार र आवश्यकता अनुसार प्लान्टलाई सानो वा ठूलो बनाउन सकिन्छ ।
निपूर्ण श्रेष्ठ काठमाण्डौं, तीनकुने स्थित भी.एस्.निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ८ मा पढ्छन् । यो सिर्जनामा निपूर्णलाई उनकै दुइ सहपाठीहरुले पनि सघाएका हुन् । सोही दिन विद्यालयमा आयोजित विज्ञान तथा प्रविधि प्रदर्शन मेलामा सहभागि विद्यार्थिहरुले ५० भन्दा बढी विभिन्न सिर्जनात्मक प्राविधिक उपकरणहरु प्रदर्शनमा राखेका थिए ।
यसरी विद्यार्थीलाई किताबी ज्ञानको अलावा प्रयोगात्मक शिक्षा र त्यो कलालाई प्रदर्शन गर्ने अवसर दिने प्रचलन निजि तथा सरकारी सबै विद्यालयले अनुसरण गर्नु आजको खाँचो टड्कारो छ |